Iwo gumi akanakisa Thermomix Kisimusi mabikirwo ekuita aya mazororo | ThermoRecipes
Iwo gumi akanakisa Thermomix Kisimusi mabikirwo ekugadzira aya mazororo
Irene Arcas | | Navidad, Thermomix mapepa
Kisimusi yava kusvika uye tese tiri kufunga nezvemamenyu eKisimusi atichagadzirira gore rino. Vazhinji venyu muri kutibvunza mamwe mabikirwo echinyakare uye vamwe kune mamwe matsva. Saka, isu tanyora ino chinyorwa ne pamusoro gumi emabikirwo eKisimusi akabudirira pane iyo blog.
Tinovimba unovada! Asi chatiri chokwadi ndechekuti ivo vachakupa imwe pfungwa yakanaka yekushamisa uye kufadza nhengo dzemhuri yako.
MERRY KRISIMASHAMU SHAMWARI Uye NDINOTENDA NENYU PAKUTEVEDZERA GORE RIMWE GORE NESU !!
1 Chokoreti inopisa
2 Krisimasi danda
4 Inoyamwa nguruve mumamota maviri
5 Cannelloni nenyama nepate
6 Hake mu cava
8 Russian Krisimasi saladhi ine prawns
9 Bourguignon matama
10 Polvorones chipanje keke
Krisimasi yega yega iri kuita tsika kuti uve nechokoreti yakanaka inopisa kutanga zuva rekutanga regore. Perekedzai pamwe nevapfumi roscon de reyes, UN Panettone kana zvimwe Churros uye chichava chiratidziro.
Iyo chaiyo chaiyo yekutanga uye yakanakisa nzira yekubheka yeKisimusi. Ichashongedza matafura ako, Ichave iri mambo wekuseva uye vadiki vanozochida nakirwa nekutapira uku kunonaka. Runako rwakagadzirwa dhizeti.
Nekunaka kwese uye nekuchengetedza kwezvinhu zvakagadzirwa pamba. Iyo yakareba asi yakapusa nzira ine inoshamisa mhedzisiro. Uri kudanana neiyi yechinyakare yeKisimusi inotapira, nekuda kwekuravira uye magadzirirwo.
Inoyamwa nguruve mumamota maviri
Iyo inoshamisa recipe ye fadza vashanyi vedu nechikafu chetsika asi chiri nyore kwazvo. Tichatora mukana wekubika zvakapetwa kaviri: chekutanga tichaibika mukati mehomwe yekugocha uye, gare gare, tinoipedzisa neinonaka gratin muchoto. Iyo nzira yakakwana iyo iwe yaunogona kugadzirira pamberi.
Cannelloni nenyama nepate
Iyo yakasarudzika mukudya kweKisimusi, kunakidzwa chaiko. Iyi nyama uye pâté cannelloni hazvikanganisi. Inokurumidza uye yakapusa, iine hunhu hunoshamisaKana iwe usiri kuda kuzvinetsa nehunyanzvi hukuru mukicheni, pasina kupokana, ichi ndicho chikafu chako.
Hake mu cava
Iyi nzira ye hake mu cava chikafu chinonaka, chakanakira zororo senge Zuva reKisimusi kana kune chero rimwe bato kana manheru akakosha nevashanyi. Ndiyo Chiedza uye nyore kugadzira dhishiNekudaro, yayo yakasarudzika cava kuravira inoita kuti ive yakakwana kuishandura kuti ive yakasarudzika dhishi.
Starter yekrisimasi, inonaka uye inonaka kwazvo. Kutanga muromo wako nendiro dzinonaka dzatinoisa gare gare pane yedu yeKisimusi menyu, Iyi sopu yegungwa ndeyekubudirira. Yakazara nekuravira, nuances uye akasiyana machira, iri dhishi gumi.
Russian Krisimasi saladhi ine prawns
Iyo inoshamisa recipe yekuburitsa sekutanga. Isu tichapa yakasarudzika uye yakakosha kubata kune ino yeRussia saradhi inofambidzana nayo nemaprawuni uye imwe tsvuku roe iyo inozoipa iyo yakasarudzika kubata kwekusiyanisa. Iyo nyore nzira, iyo yatinogona kugadzirira pamberi uye izvo, pasina kupokana, zvichave kubudirira zvechokwadi.
Kana iwe uchida kubudirira ino yeKisimusi, aya mabruguignon matama anoita kuti zvive nyore kwazvo kwauri. Kunze kwekuve unoshamisa, ivo vari nyore zvekuti ivo vanokushamisa iwe. Kudya nyama iyo iwe yaunogona kushanda seyakakosha iyi Kisimusi uye isingazosiye chero munhu asina hanya.
Polvorones chipanje keke
Wakave uine zvakasara zveKisimusi polvorones? Gadzirira keke rinoshamisa kuti utore mukana weKisimusi maswiti. Iwe uchaona iyo yakanaka uye isina kusimba mameseji yainayo. Uye zvakakosha kutora neiyo kana kofi yekudya kwemangwanani kana tudyo.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Navidad, Thermomix mapepa
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Zvinyorwa » Special Recipes » Navidad » Iwo gumi akanakisa Thermomix Kisimusi mabikirwo ekugadzira aya mazororo
9 inokurumidza dhizeti yanhasi (Zuva reKisimusi)
10 nyama yekubikisa yemhemberero dzeKisimusi